Golaha shacabka ma yahay goob looga hadli karo sirta qaranka iyo buuq jirey maanta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Golaha shacabka ma yahay goob looga hadli karo sirta qaranka iyo buuq jirey maanta
Waxa duhurnimadii maanta la isugu yimi golaha shacabka ee magaalada Muqdisho si ay u dhegeystaan warbixin ay dhiibi lahaayeen laamaha amniga xilli argagixisada iyo kuwa taageera ay qaraxyada iyo xasuuqyada sii kordhiyeen.
Waxa dibedda golaha looga saaray waxa loogu yeero saxaafada oo la ogyahay in boqolkiiba 60 u ashaqeeyaan argagixisada kooxda gaalaynta ee shabaab qaasatan inta ku sugan Muqdisho.
Waxa kale oo la ogyahay in boqolkiiba 25 inta ku jirta golaha shacabka ay u shaqeeyaan argagixisada ama qabaan fikrada dawlad diidka iyo kala dambeyn la’aanta, qaarkoodna sirta qaranka u gudbiyaan cadowyada badan ee dalka.
Hadaba gole sidaasa ma lagu aamini karaa in looga hadlo sirta qaranka ee la dagaalanka argagixisada xalaashatey dhiiga Muslimiinta ayadoo ay fadhiyaan kuwii wax laga sheegaayay.
” Ama run sheeg ama ha sheegin golaha barlamaanka Muqdisho maaha gole sir qaran looga hadli karo. Somaliya sir qaran maleh waa dal qaawan oo cadowgeedu fadhiyo meelkasta ayuu yiri Xuseen Gacalow oo ah ruug cadaa ka faalooda arimaha Somaliya.
Ani waxaan dawlada iyo inta u daacada dalka inuu xasilooni helo cadowgeedana jabiyo rabto kula talin lahaa, inta la helayo caasimad qaran iima muuqato dal degaayo, waxayba maraysaa anaa dhulka leh ayuu raaciyay Xuseen Gacalow oo Muqdisho jooga weligiina meel uga bixin.
Sir qaran haday jirtana haku ekeeto inta ku shaqada leh waana sida kaliya ee cadowga looga adkaan helo xilli argagixisadu iyo kuwas u shaqeeuya ay meelkasta miino dhigeen si ay u dhahaan dawladu ma shaqayn karto.
Waa talaabo u adeegaysa dantooda guud oo ah in Somalioya ka bixin fowdo noqotana meel ay gabaad ka dhitaan weligood. Waxa fikir sidaasa ay la wadaagaan cadowyada hore ee qaranku lahaa.
Fadhigii maanta ayaa waxa arbushey tiro aad u yar oo lagu tilmaamey inay u adeegayaan argagixisada.
Bal hoosta ka dhegeyso wasiir waxbarashada Goodax oo aan waxba u qarin kuwa ku jira barlamaanka ee la jira argagixisada.